Sunday February 24, 2019 - 06:30:57 in Wararka by Super Admin
Habeenkii xalay ayay diyaaradaha Maraykanka waxay duqeymo culus ka fuliyeen deegaanno katirsan gobolka Shabeellaha hoose, halkaas oo ay ku dhinteen, kuna dhaawacmeen dhowr ruux oo shacab ah.
Sidoo kale waxaa duqeymahan ku dhaawacmey 2 ruux oo kale, kuwaas oo hadda xaaladooda lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka ee deegaanka Kuunya Barrow.
Diyaradaha Maraykanka waxay dhinac kale duqeymo kuwan lamid ah ka fuliyeen Jannaale iyo deegaanka Dacaaraha oo dhamaantooda katirsan gobolka Shabeellaha hoose, inkastoo aysan nasoo gaarin warar la xiriira khasaaraha ka dhashey duqeymahaas.
Maraykanka ayaa qeybo kamid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya wuxuu u aqoonsaday aag dagaal oo ay banaan tahay in dadka shacabka ah lagu xasuuqo, waxaana shacabka Soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen arrinkaas.
Isha Warka: Idaacadda Alfurqaan